Yoshuwa 23 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
3 Nina nikubonile konke abekwenzile uYehova uThixouThixo wenu kwezo ntlanga zonke ngenxa yenu; ngokuba uYehova uThixouThixo wenu nguye onilweleyo.
5 NguYehovaNguYehova uThixouThixo wenu oya kuzigxotha ebusweni benu, azigqogqe phambi kwenu, nilihluthe ilizweilizwe lazo, njengoko wathethayo kuni uYehova uThixouThixo wenu.
7 ukuze ningadibani nezi ntlanga ziseleyo, ezi ke zinani, ningalikhankanyi igamaigama loothixo bazo, ningabafungi, ningabakhonzi, ningabanquli.
8 Ize ninamathele kuYehova uThixouThixo wenu, njengoko nikwenzileyo unanamhla.
9 UYehova wazigqogqa ebusweni benu iintlangaiintlanga ezinkulu, ezinamandla; ke nina akumanga mntu phambi kwenu unanamhla;
10 indodaindoda inye kuni isukele iwakaiwaka; ngokuba uYehova uThixouThixo wenu nguye onilwelayo, njengoko wakuthethayo kuni.
11 Zigcineni kunene ngenxa yemiphefumlo yenu, ukuba nimthande uYehova uThixouThixo wenu.
13 yazini kakuhle ukuba uYehova, uThixouThixo wenu, akayi kuphinda azigqogqe ezi ntlanga phambi kwenu. Zoba zizibatha nemigibe kuni, neziniya emacaleni enu, noviko emehlweni enu, nide nicinywe kulo mhlaba ulungileyo, aninikileyo uYehova uThixouThixo wenu.
14 Namhla ndihamba ngendlela yoluntu lonke. Niyazi ngentliziyo yenu yonke, nangomphefumlo wenu wonke, ukuba akuwanga phantsi nalinye ilizwi emazwini onke alungileyo, abewathethile uYehova uThixouThixo wenu ngani; onke enzekile kuni; akuwanga phantsi nalinye ilizwi kuwo.
15 Kothi, njengoko lenzekayo kuni lonke ilizwi elilungileyo, abelithethile uYehova uThixouThixo wenu kuni, enjenjalo ukulenza kuni lonke ilizwi elibi, ade anitshabalalise kulo mhlaba ulungileyo, aninikileyo uYehova uThixouThixo wenu.
16 Ekuwugqitheni umnqophiso kaYehova uThixouThixo wenu, aniwisele wona, naya nakhonza thixo bambi, nabanqula, wovutha umsindoumsindo kaYehova kuni, nicinywe kamsinya emhlabeni olungileyo aninikileyo.
Exploring the Meaning of Yoshuwa 23